प्रचण्डजीलाई राजासँग मिलेर भए पनि सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने थियो : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई
आजको न्युज मंगलबार, १२ चैत २०७५
झण्डै पाँच दशक लामो राजनीतिक यात्रा गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई एक दशक लामो सशस्त्र माओवादी ‘जनयुद्ध’को मूल नेतृत्वमा रहेका थिए । वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आगामी चार वर्षभित्र देशलाई नेतृत्व दिने अभियानमा आफूहरू रहेको बताउने भट्टराईका विशेषगरी राजनीतिक जीवनका उतारचढावबारे आजको न्युजकर्मी जगन्नाथ दुलाल र घनेन्द्र ओझाले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
तपाईंको झण्डै पाँच दशक लामो राजनीतिक यात्राका सुखद वा दुखद क्षण सम्झना छन् ?
जीवन भनेकै सुखद् र दुखद् क्षणहरूको समष्टिगत पुञ्ज हो । सबै मान्छेका यस्ता क्षण हुन्छन्, मेरा पनि यस्ता क्षण छन् । तर मेरो जीवनमा दुखद् भन्दा सुखद् क्षण नै बढी छन् ।
म सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएको मान्छे हुँ । राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्ने र देश दुनियाँ बुझ्ने अवसर पाएँ । यो मेरा निम्ति सुखद पक्ष हो । गाउँको एउटा स्कुलबाट बोर्ड फर्स्ट हुनु पनि सुखद पक्ष हो मेरो ।
अस्कल क्याम्पसमा पनि आईएस्सीमा बोर्ड फर्स्ट नै भएँ ।
त्यसपछि भारत जानुभयो पढ्न, त्यहाँका केही सम्झना छन् ?
छन्, भारतमा जहाँ म आर्किटेक्चर पढ्थेँ, त्यहाँ धनीका, ठूला व्युरोक्रेट्सका छोराछोरी पढ्ने गर्थे । म त्यहाँ पनि राम्रो विद्यार्थी भएकाले मसँग अन्य विद्यार्थी पढ्न आउँथे । म उनीहरूकहाँ जान्थेँ तर साथीका बुबाआमाले कान्छा, कान्छी भनेर उनीहरूका घरका काम गर्ने नेपालीलाई बोलाउँथे । यस कुराले मलाई च्वास्स घोच्थ्यो । त्यसपछि मलाई देश समृद्ध नबनाई नहुनेरहेछ भन्ने लाग्यो । यसका लागि राजनीतिमा नेतृत्व नगरी हुँदैन भन्ने लाग्यो । त्यही भएर अखिल भारतीय नेपाली विद्यार्थी संघ बनाएर राजनीतिमा लागेँ । त्यसबेलाका नेपाली नेताहरू वीपी कोइराला, तुलसीलाल अमात्य, पुष्पलालहरू, मोहनविक्रमसँग भेट्दै अगाडि बढेँ ।
अभानेविसंघमा विवाद भएर तपाईंलाई अध्यक्षबाट हटाइयो नि !
त्यो बेला हाम्रो अभानेविसंघ साझा संगठन थियो । त्यही बेला वीपी राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेर नेपाल फर्किनुभयो तर उहाँलाई जेलमा राखियो । उहाँ क्यान्सरको बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो । मैले अभानेविसंघको अध्यक्षका हैसियतले उहाँ (वीपी)लाई उपचारका लागि रिहा गर्नुपर्छ भनेर वक्तव्य निकालेँ । त्यसबेला मण्डलेहरूको दबदबा थियो । अन्य दलहरूलाई त सुन्न पनि सक्दैनथे । त्यस्तो अवस्थामा दूताबासकै केही मान्छेले केही व्यक्तिलाई उचालेर मेराविरुद्धमा वक्तव्यबाजी गर्ने र मलाई हटाइयो भन्ने प्रचारबाजी गरेका हुन् । तर त्यसपछि अन्य धेरै साथीले भने मलाई सहयोग गरे । त्यसपछि झन् म स्थापित हुनपुगेँ । सबैसँग राम्रो भयो सम्बन्ध । कांग्रेस, कम्युनिष्ट सबै पार्टीका नेताले मलाई भेटे ।
तपाईंको परिवार गोरखाका राजाहरूको पुरोहित, ज्योतिषीको परिवार हो, कसरी कम्युनिष्ट विचारधाराप्रति आकर्षित हुनुभयो ?
सत्य र न्याय के हो भन्ने मेरो खोजी हो । यो दुनियाँलाई बुझ्ने कुरा वैज्ञानिक र वस्तुवादी हुनुपर्यो । म आफैँमा विज्ञानको विद्यार्थी पनि हुँ । यो जगत भौतिक जगत हो । यसको विकासबारे मार्क्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले सुव्यवस्थित ढंगले व्याख्या गर्छ । यसर्थ यो विज्ञानसम्मत ढंगले गरिएको व्याख्या उपयुक्त हो भन्ने लाग्यो ।
यसर्थ म कसैको भनाइ वा बहकाउमा लागेर नभई आफ्नै अध्ययन र ज्ञानका कारण कम्युनिष्ट बनेको हुँ । अर्को कुरा नेपालमा जुन बेरोजगारी, उत्पीडन र गरिबी थियो, त्यसको अन्त्यका लागि सुरुमा कांग्रेसले केही गर्न खोजेको त हो तर पछि वीपीले जुन मेलमिलापको नीति ल्याएर राजासँग मिल्ने कुरा गर्नुभयो त्यसपछि भने राजा, जो सामन्तवादको केन्द्र हो, उसैसँग मिलेर त परिवर्तन संभव छैन भन्ने लाग्यो । र, कांग्रेसभन्दा कम्युनिष्ट नै प्रगतिशील रहेछन् भन्ने पनि लाग्यो । तर त्यस बेलासम्म वीपी कोइरालाप्रति म निकै आकर्षित थिएँ ।
प्रसंग बाबुराम–प्रचण्ड सम्बन्धतिर मोडौँ । तपाईंहरूको सम्बन्ध २०४० सालदेखि रह्यो । बीचमा तपाईंहरूबीच प्रेम र घृणाको जस्तो सम्बन्ध बढ्दै गयो । तपाईंलाई प्रचण्डले दुई पटक कारवाही पनि गर्नुभयो... ।
मैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेपछि प्रचण्डले ज्ञानेन्द्र (तात्कालीन राजा)लाई खुसी पार्न मलाई हटाएको भन्ने मेसेज दिन खोज्नुभएको हो ।
प्रचण्डजीले स्टालिनको सूत्र घोकेर मार्क्सवादी बन्नुभएको । यहीँनेर हाम्रो चिन्तन र शैलीमा भिन्नता थियो । उहाँको नोकरशाही, निरंकुशतावादी सोच, मेरोचाहिँ अलिक लोकतान्त्रिक र जनतासँग प्रत्यक्ष सहभागिता हुने सोच । यसै कारण हाम्रो संघर्ष हो ।
तपाईंले प्रचण्डलाई राजावादीको आरोप लगाउने, प्रचण्डले तपाईंलाई भारतपरस्तको आरोप लगाउने क्रम पनि चल्यो नि ? भन्नेहरूले बाबुरामसँग प्रचण्ड डराउने, प्रचण्डसँग बाबुराम डराउने अवस्थाले त्यस्तो भएको भन्थे नि, खास के हो ?
त्यस्तो होइन । प्रचण्डजी स्टालिनवादी धारबाट आउनुभयो । पार्टीमा एउटा ठूलो र बलियो नेता हुन्छ र त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ भन्ने स्टालिनवादी मान्यता जुन छ, प्रचण्डजी त्यस धारमा हुनुहुन्थ्यो । ऊ सर्वज्ञानी हुन्छ र कार्यकर्ताले उसलाई मानिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो उहाँको । उहाँ त्यस्तै बन्न चाहनुहुन्थ्यो ।
म भने भारतमा पढ्ने क्रममा जवहारलाल नेहरु विश्वविद्यालय जस्तो ठाउँमा, जुन मार्क्सवादी दर्शन र वामपन्थीहरूको अध्ययनको त महत्त्वपूर्ण केन्द्र नै हो, त्यहाँ पढेर मार्क्सले वास्तवमा के भनेका थिए भन्ने बुझेको । तर प्रचण्डजीले स्टालिनको सूत्र घोकेर मार्क्सवादी बन्नुभएको । यहीँनेर हाम्रो चिन्तन र शैलीमा भिन्नता थियो । उहाँको नोकरशाही, निरंकुशतावादी सोच, मेरोचाहिँ अलिक लोकतान्त्रिक र जनतासँग प्रत्यक्ष सहभागिता हुने सोच । यसै कारण हाम्रो संघर्ष हो । व्यक्तिगत टकराव होइन ।
मेरो सोच राजतन्त्र अन्त्य गरी लोकतन्त्र ल्याएपछि मात्र समाजवादको ढोका खुल्छ भन्ने, प्रचण्डजीचाहिँ राजासँग मिलेर भए पनि सत्तामा पुगिन्छ भने भइहाल्छ भन्ने । यस्तो परंपरावादी सोच राख्ने उहाँ । यही कुरामा हाम्रो संघर्ष हो । तर अन्ततः मैले भनेकै लाइन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै देश त पुग्यो नि त !
फौजी र सांगठनिक हिसाबले प्रचण्ड तगडा, वैचारिक र राजनीतिक हिसाबले बाबुराम तगडा, यी दुईलाई मिलाएर लैजान नसकेको हो भन्ने विश्लेषण पनि सुनिन्छ नि ?
हामी संघीय गणतन्त्रमा त पुग्यौँ त, नमिलाएको भए कसरी पुग्थ्यौँ ?
यदि त्यसो भए तीन दशक बढी सँगै संघर्ष गरेर आएका प्रचण्ड र बाबुराम अन्ततः किन छुट्टिए ?
युग पूरा भयो, कार्यभार पूरा भयो । एउटा यात्रा पूरा भयो । यात्रा पूरा भएपछि त अर्को यात्रा सुरु गर्नुपर्छ नि ! अरू सहयात्री हुन्छन् नि अर्को यात्रामा । अबको यात्रा हिजोको लड्ने भिड्ने बन्दुक चलाउने भन्दा फरक यात्रा हो । त्यही भएर म नयाँ यात्रामा नयाँ यात्रीसँग हिँडेको हुँ । उहाँ (प्रचण्ड)सँग कुनै दुश्मनी होइन ।
तपाईं अहिले नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको संयोजक हुनुहुन्छ । नयाँ शक्ति पार्टीको शक्ति कति छ ?
हामी अहिले बिरुवा रोप्दै छौँ । यो बिरुवा रोप्ने बेला हो । हामीले कति फल लाग्यो भनेर सोचेका छैनौँ । हामीले राम्रो बिरुवा रोपेका छौँ । हुर्किन समय लाग्छ तर यसले राम्रो फल दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, १२ चैत २०७५